Ukuhanjiswa kweempahla eSwitzerland
Inkonzo yaseSwitzerland i-Apteka inikeza iinkonzo zokuthengwa nokuhanjiswa kweempahla eSwitzerland. Ukuthengwa kwenziwa kuphela kwii-pharmacy ezisemthethweni, iivenkile kunye ngqo nabakhiqizi. Ukuthumela kwenziwa ngeposi yeSwitzerland.
Unokuqinisekiswa ngekhwalithi yeSwitzerland yeemveliso ezinikezelweyo.
I-1) Ukuhanjiswa okuqhelekileyo kweeveki ze-2-3 (iSwitzerland Post)
I-2) Ukuhanjiswa okungxamisekileyo ukuya kwiiyure ze-48 naphi na eYurophu, ukuya kuthi ga kwiiyure ze-72 naphi na emhlabeni (apho indiza ibhabha khona). Kukho izithintelo zesiko. Chaza indleko kunye nokukhethwa kokunikezelwa ngokukodwa.
Ukuthunyelwa kweempahla kwenziwa kwiSwitzerland ngezothutho kunye neenkampani zeposi. Kwilizwe ngalinye kukho izithintelo zamasiko kwixabiso eliphezulu lempahla ethunyelwe, nceda uqwalasele oku ngolu hlobo.
Ukuziswa eYurophu. Izinga lokuthumela lixhomekeke kukukhawuleza komyalelo kwaye kubalwa ngamnye kumthengi ngamnye.
Ukuthunyelwa eAsia: Ukuhanjiswa kweepakethi ezivela eSwitzerland kunokwenzeka kwiHong Kong, apho ungathumela khona e-Asia ngezinye iinkampani zothutho. Ukongeza, ungayifumana iplasela ethunyelwe yiSwitzerland Post ukuya kwiofisi yeposi yelizwe kwindawo ohlala kuyo.
Ukuthumela eMelika. Ukunikezwa kwamavithamini kunye nokulungiselelwa kwe-bezretpurnyh ngaphandle kwemimiselo, kwiidakamizwa zonyango zichaze ngokungezelela.
Ukuziswa kwiRashiya. Intlawulo yee-oda ezifanelekileyo ukuya kwi-ruble ye-15.000 eRashiya yenziwe xa ifunyenwe. Iimveliso zibiza kakhulu kune-15.000p. kuhanjiswa ngokuhlawula ngokupheleleyo. Umngcipheko wobuNtu obunxulumene nokuwela umda ulawulwa nguMthengi, ukuba umqulu awuzange udlule kwizithethe zelizwe lakho, ubuyela eSwitzerland. Zonke ixabiso kwisayithi sele zidweliswe ngokuhambisa eMoscow.
Ungalawula nayiphi na imveliso ekufuneka ifike kwi-euro ye-1000. Iimveliso zibiza ngaphezu kwe-euro ye-1000 ezingeniswe eRussia ngenxa yemingcele yemithwalo, okanye zixhomekeke kwimisebenzi yamasiko ngokwexabiso le-30% yexabiso lempahla.
Ukuhanjiswa kwamanye amazwe ehlabathi. Ukuthunyelwa kweposi.
Ngosizo lweNkonzo yaseSwitzerland-Apteka, unako ukuyalela amayeza, iivithamini, izimonyo zezokwelapha, iimveliso zabantwana kunye neminye imikhiqizo kwiivenkile nakwii-pharmacy eSwitzerland nakwamanye amazwe ehlabathi. Ukongeza kwi-assortment enikezelwayo, unako ukuyalela nayiphi na imveliso ehambelana nokusetyenziswa kwakho okungeke kuthengwe kwilizwe lakho.
Ukuba unemibuzo eyongezelelweyo okanye ube nenxaxheba yentsebenziswano, bhalela info@swiss-apteka.com